Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment जहाज ३५० फिटमाथिको तारमा झुण्डिएपछि उद्दारकर्मी पनि चकित ! - Pnpkhabar.com
जहाज ३५० फिटमाथिको तारमा झुण्डिएपछि उद्दारकर्मी पनि चकित !
दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा पति पत्नी सवार टु सिटर जहाज ३५० फिटमाथिको तारमा झुण्डिएपछि उद्दारकर्मी पनि चकित परेका छन् । पति पत्नी जंगली इलाकामाथि हुदै विमानमा उड्दै गर्दा साहसिक यात्राको लागि राखिएको तारमा विमान ठोक्कियो । यतिमात्र होइन ३५० फिटमाथि विमान आश्चर्यजनक रुपमा त्यहीँ तारमा अड्कियो । विमानमा सवार यात्रु विमानभित्रै फसे ।
यो तारमा भारी विमान एउटा नटबोल्टको भरमा झुण्डिएको थियो । उद्धार टोलीलाई पनि त्यहाँ पुग्न निकै परिश्रम गर्नुपर्यो । डर यो थियो कि यदि तारमा कम्पन भयो भने यात्रुसहितको विमान सिधै ३५० फिट तल खस्नेछ । उद्धार टोलीले तारभन्दा माथि अर्को हेलिकप्टर उडाए । माथिबाट हेर्दा यात्रुलाई हेलिकप्टरबाट माथि तान्न पनि सम्भव देखिएन । त्यसपछि उद्धार टोलीका एक सदस्य तारबाटै विमान अड्किएको ठाउँसम्म गए । उनले डोरी लगाएर यात्रुलाई बाहिर निकाले । उनले यात्रुलाई बाहिर निकाल्दासम्म विमान भने खसेन । विशेषज्ञका अनुसार विमान १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा भन्दा कम गतिमा उडिरहेकोले तारमा ठोक्किदा पनि आगो लागेन । एजेन्सी
यी हुन् बिजुलीको गतिमा दौडिने ७ बर्षिय बालक, जसले दौडमा बनाए विश्व रेकर्ड (भिडियोसहित)
आफ्नी आमासँग गरे सात वर्षका छोराले विवाह, मन छुने कारण यस्तो
मानवभित्र मानवता देखिनुको सट्टा जनावरमा देखिन्छ हेर्नुहोस सिंहले गाईको बाच्छो बचाएको भिडियो
सुन्दरीलाई बिकिनीमा देखेपछि सुँगुरले टोकीदिए नितम्ब (भिडियोसहित)